Akụkọ - Ihe egwu na mgbochi ọrụ ike ikuku mba ofesi
EBIRD yiri osisi osisi ihe nkwụnye oriọna njide ụlọ nnụnụ
Ịchọ mma ụlọ
Mgbidi mgbidi igwe
Nko ndozi nko
Ihe eji eme ụlọ
Ihe njide akwa nhicha
Onye njide anụ ahụ
Onye na -ejide anụ ụlọ
Ngwa egwuregwu ọla
Ogwe mgbidi mgbidi
Obere ụlọ ịsa ahụ
Ọkwa igwe kwụ otu ebe (A)
Ihe ize ndụ na igbochi ọrụ ike ikuku mba ofesi
Akụkọ gbasara ikuku ikuku: Atụmatụ “Belt na Road” enwetala ezigbo nzaghachi site na mba ndị so n'ụzọ ahụ. Dị ka onye na -emepụta ma na -eji ike emegharị emegharị n'ụwa, China na -esonye n'ike n'ike n'ike ike ikuku ikuku mba ụwa.
Ụlọ ọrụ ike ikuku nke China esonyela aka na asọmpi mba ụwa na imekọ ihe ọnụ, kwalitere ụlọ ọrụ ndị bara uru ka ha gaa zuru ụwa ọnụ, wee chọpụta usoro mbupụ nke ụlọ ọrụ ike ikuku site na itinye ego, ire akụrụngwa, ọrụ na ọrụ mmezi na arụmọrụ niile, wee nweta nsonaazụ dị mma. .
Mana anyị ga -ahụrịrị na site na mmụba nke ọrụ ike ikuku mba ụwa nke ụlọ ọrụ China, ihe egwu metụtara ọnụego mgbanwe, iwu na ụkpụrụ, ego na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga -esokwa ha. Otu esi amụrụ nke ọma, ghọta, ma zere ihe egwu ndị a wee belata mfu na -enweghị isi dị nnukwu mkpa maka ụlọ ọrụ ụlọ iji meziwanye asọmpi mba ha.
Akwụkwọ a na -eduzi nyocha ihe egwu na njikwa ihe egwu site n'ịmụ ọrụ South Africa nke ụlọ ọrụ A na -etinye na mbupụ akụrụngwa ịnya ụgbọ ala, na -atụpụta njikwa njikwa na njikwa njikwa maka ụlọ ọrụ ike ikuku na usoro nke ịga ụwa, ma na -agba mbọ inye onyinye dị mma. mmepe ahụike na -adigide nke ọrụ ụlọ ọrụ ike ikuku nke China.
1. Ụdị na ihe egwu nke oru ike ikuku mba ofesi
(1) Ihe owuwu nke ugbo ikuku mba ofesi na -anabata ọnọdụ EPC
Ọrụ ike ikuku mba ofesi nwere ụdịdị dị iche iche, dịka ụdị nke esiri nye “ụlọ nrụpụta” otu ụlọ ọrụ maka mmejuputa ya; ihe atụ ọzọ bụ ọnọdụ “injinịa EPC”, nke gụnyere ịwepụta ọtụtụ ndụmọdụ imewe, ịzụrụ ngwa, na iwu n'otu oge; na Dị ka echiche nke usoro ndụ niile nke oru ngo, a na -enyefe onye nrụpụta maka imewe, imebe ya na ịrụ ya.
N'ịjikọta njirimara nke ọrụ ike ikuku, ọrụ ike ikuku mba ụwa na -agbasokarị ụdị nkwekọrịta nkwekọrịta EPC, ya bụ, onye ọrụ nkwekọrịta na -enye onye nwe ya ọrụ zuru oke gụnyere imewe, iwu ihe, ịzụta ngwa, ntinye na inye ọrụ, mmecha, okporo azụmahịa. -nke ike njikọ ejikọrọ, na nnyefe ruo ngwụcha oge akwụkwọ ikike. Na ọnọdụ a, onye nwe ya na-eduzi ọrụ ahụ kpọmkwem na nnukwu ọrụ, onye ọrụ ngo na-eburu ibu ọrụ na ihe egwu dị ukwuu.
Ihe owuwu ikuku nke ụlọ ọrụ A South Africa nakweere ụdị nkwekọrịta nkwekọrịta EPC.
(2) Ihe egwu nke ndị ọrụ nkwekọrịta izugbe EPC
N'ihi na oru ngo ndị mba ofesi na -agụnye ihe egwu dị ka ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụ na ụba nke obodo ebe ọrụ a dị, atumatu, iwu na ụkpụrụ metụtara mbubata, mbupụ, isi obodo na ọrụ, yana usoro njikwa mgbanwe mba ofesi, ọ nwekwara ike zute ala na ọnọdụ ihu igwe, na teknụzụ dị iche iche. Ihe ndị achọrọ na ụkpụrụ, yana mmekọrịta dị na ngalaba gọọmentị ime obodo na okwu ndị ọzọ, yabụ ihe ndị dị ize ndụ nwere oke, nke enwere ike kewaa n'ime ihe egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ihe egwu akụ na ụba, ihe egwu teknụzụ, ihe egwu azụmahịa na mmekọrịta ọha na eze, yana ihe egwu njikwa. .
1. Ihe ize ndụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Ndabere ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke obodo na mpaghara na -anaghị akwụ ụgwọ ahịa nwere ike bute onye ọrụ nkwekọrịta nnukwu mfu. Ọrụ South Africa wusiri nyocha na nyocha ike n'oge mkpebi: South Africa nwere ezi mmekọrịta na mba ndị agbata obi, na enweghị ihe egwu zoro ezo doro anya maka nchekwa mpụga; Azụmaahịa mba abụọ China na South Africa etoola ngwa ngwa, nkwekọrịta nchekwa dị mkpa dịkwa mma. Agbanyeghị, okwu nchekwa nchekwa na South Africa bụ ihe egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mkpa chere ọrụ ahụ ihu. Onye ọrụ nkwekọrịta izugbe EPC na -ewe ndị ọrụ buru ibu n'ọrụ mmemme mmejuputa iwu, yana nchekwa nkeonwe na ihe onwunwe nke ndị ọrụ na ndị na -ahụ maka njikwa na -eyi egwu, nke kwesịrị ka ewere ya kpọrọ ihe.
Na mgbakwunye, ihe egwu dị na mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na mgbanwe ọchịchị ga -emetụta ọbịbịa nke atumatu yana ịmanye nkwekọrịta. Esemokwu agbụrụ na nke okpukpe na -etinye ihe egwu zoro ezo na nchekwa nke ndị ọrụ nọ na saịtị.
2. Ihe egwu akụ na ụba
Ihe egwu akụ na ụba na -ezo aka na ọnọdụ akụ na ụba nke onye ọrụ ngo, ike akụ na ụba nke obodo ebe ọrụ a dị, yana ike idozi nsogbu akụ na ụba, ọkachasị n'ihe gbasara ịkwụ ụgwọ. Ọ gụnyere akụkụ dị iche iche: onu oriri, ihe egwu mgbanwe mba ofesi, nchedo, ịkpa oke ụtụ isi, enweghị ike ịkwụ ụgwọ nke ndị nwe ya, na igbu oge ịkwụ ụgwọ.
N'ime oru ngo South Africa, a na -enweta ego ọkụ eletrik na Rand dị ka ego mmezi, na mmefu ihe nrụpụta akụrụngwa n'ime oru a na -edozi dollar US. Enwere ụfọdụ ihe egwu ọnụego mgbanwe. Ọnwụ nke mgbanwe mgbanwe mgbanwe ego nwere ike ịfefe ego ntinye ego nke oru ngo a. Ọrụ South Africa meriri n'agba nke atọ nke ịrịọ maka ọrụ ume ọhụrụ nke gọọmentị South Africa site na ọnụ ahịa. N'ihi asọmpi ọnụ ahịa kpụ ọkụ n'ọnụ, usoro ịkwadebe atụmatụ ịre ahịa ịtinye na mmepụta dị ogologo, enwere ike ịnwe mfu nke ngwa ikuku na ọrụ ikuku.
3. Ihe egwu dị na ụzụ
Gụnyere ọnọdụ ala, ọnọdụ mmiri na ọnọdụ ihu igwe, inye ihe, akụrụngwa, nsogbu ụgbọ njem, ihe ize ndụ njikọ okporo ụzọ, nkọwa teknụzụ, wdg. Ike etinyere nke ike ifufe nke South Africa etinyere n'ime ọkụ eletrik na -eto n'ike n'ike, mmetụta nke ikuku ikuku na sistemụ ike na -abawanye, ụlọ ọrụ ọkụ eletrik na -aga n'ihu na -emezi ntuziaka njikọ njikọ okporo. Na mgbakwunye, ka iwelie ọnụego ume ume, ụlọ elu dị elu na agụba ogologo bụ usoro ụlọ ọrụ.
Nchọpụta na ntinye nke igwe ikuku dị elu na mba ofesi dị obere n'oge, etinyerela ụlọ elu dị elu site na mita 120 ruo mita 160 n'ime azụmahịa azụmahịa na ogbe. obodo m nọ n'oge mmalite ya nwere ihe egwu dị na teknụzụ metụtara usoro ọrụ aka dị ka atụmatụ njikwa otu, ụgbọ njem, nrụnye, na ihe owuwu metụtara ụlọ elu dị elu. N'ihi oke mmamịrị na -abawanye, enwere nsogbu nke mmebi ma ọ bụ mkpọtụ n'oge njem na oru ngo a, na idozi mmekpa ahụ na ọrụ esenidụt ga -eweta ihe egwu nke mwepụ nke ike ọkụ na ọnụ ahịa na -abawanye.
Oge ezipụ: Sep-15-2021
Ọla Mgbidi Ọla, Uwe mkpuchi mkpuchi mkpuchi, Ọhazi nko nko, Nko ejiri njiko, Ndị na -etinye ite ite osisi, Ogwe osisi kwụgidere mgbidi,